Ngokumalunga noTshintsho lweCilmate kunye nokufudumala kwehlabathi
Iholide ekhokelwayo ngeNgcaciso engqongileyo neyinkimbinkimbi
Ukutshintsha kwemozulu, ukufudumala kwehlabathi ngokuthe ngqo, kuye kwabamba ingqalelo yabantu emhlabeni jikelele kwaye kuye kwaphefumlela ingxoxo enkulu kunye nezenzo-zobuqu, ezopolitiko kunye neenkampani-kunokuba kukho nawuphi na umcimbi wendalo kwimbali.
Kodwa yonke loo ngxoxo, kunye neentaba zedatha kunye nembono ephikisanayo ehamba nayo, ngamanye amaxesha yenza kube nzima ukwazi ngokwenene oko kwenzekayo. Esi sikhokelo siyakunceda ukuba unqumle uhlaziyo kunye nokudideka uze ufike kwiinyaniso.
AmaNts kunye neeBolts zeTshintsho kweMozulu
Isinyathelo sokuqala ekufundeni into enokuyenza ukunciphisa ukufudumala kwehlabathi, kwaye unokukunceda njani, kukuqonda ingxaki.
Abantu Benza Njani Ukufudumala Kwehlabathi?
Utshintsho lwemozulu: Ukubonwa koMoya kunye nomhlaba
Ukutshintsha kwemozulu: Iimpembelelo kumaLwandle
Utshintsho lwemozulu: Iimpembelelo kwiLizwe eliNgciniweyo
IiGesi zeGreenhouse kunye neGreenhouse Effect
Impembelelo yokutsalwa kwe-greenhouse yinto engokwemvelo, kwaye ezininzi i-gases ezitshatyalaliswayo zenzeke ngokwemvelo, ngoko kutheni zikhankanywe njengeengxaki xa kukho ukutshisa kwehlabathi?
Iisiseko ngeGesi yokuGcina
Iimiphumo zangoku kunye nexesha elizayo lokutshintsha kwemozulu
Iziphumo zokufudumala kwehlabathi zihlala zixutyushwa ngeemeko ezizayo, kodwa ezininzi zeziphumo zisele zaqhuba kwaye zinempembelelo kuyo yonke into esuka kwizinto eziphilayo ukuya kwimpilo yabantu. Kodwa apheli kakhulu. Ukuba sisenza ngoku, uninzi lwezenzululwazi lukholelwa ukuba sinokuphepha ezininzi izinto ezimbi kakhulu zokufudumala kwehlabathi.
Ukutshintsha kwemozulu kunye neMozulu ephezulu
Utshintsho lwemozulu kunye neNqanaba loLwandle
Ukufudumala kwehlabathi kunye nePhenomena enkulu
Ukutshintsha kweMntla: Ukutshintsha kwemozulu kwi-Arctic
I-Phenology ye-Spring kunye noTshintsho lwemozulu
Ukutshintsha kwemozulu kunye neMpilo yabantu
IiNdawo eziPhezulu kakhulu
Deer, iLyme Disease, kunye noTshintsho lwemozulu
Utshintsho lwemozulu kunye noKhuseleko lokutya
Ukutshintsha kwemozulu, izilwanyana zasendle kunye nezinto eziphilayo
I-Wildlife Echaphazelekayo Ngokufudumala Kwehlabathi?
Iintaka Zokuphelelwa Kwenzeka Kukhawuleza Kunokuba Kukholelwa Ngaphambili
Utshintsho lwemozulu kunye neZendalo
Utshintsho lwemozulu kunye noveliso lweMephu yeSyphuphu
Utshintsho lwemozulu kunye ne-Skiing
Ukufudumala kweMhlaba kuPhakamisa iPhakamileyo yeSizwe e-US kwiLuhlu oluKhuselekileyo
Ukunciphisa ukufudumala kwehlabathi kunye nokunciphisa imiphumo yayo kuyakufuna ukudibanisa umgaqo-nkqubo woluntu, ukuzinikela kwezentsebenziswano kunye nokuthatha isenzo somntu. Iindaba ezilungileyo kukuba iimeko zezulu ezikhokelayo zehlabathi ziye zavuma ukuba kusekho ixesha elaneleyo lokujongana nefuthe lokufudumala kwehlabathi xa sisenza ngoku, kunye nemali eyaneleyo yokufumana umsebenzi ngaphandle kokuphazamisa ezoqoqosho.
INgqungquthela yokuTshintsho kwemozulu eParis
Utshintsho lwemozulu kunye nawe
Njengommi nomthengi, unokuchaphazela iipolisi zomgaqo-nkqubo kunye nezigqibo zoshishino ezichaphazela ukufudumala kwehlabathi kunye nokusingqongileyo. Unokwenza nendlela yokuphila yonke imihla ekunciphiseni igalelo lakho ekufudumeni kwehlabathi.
Izinto ezili-10 eziphezulu ongayenza ukunciphisa ukufudumala kwehlabathi
Nciphisa phantsi i-Car Car emissions
Izindlela ezisixhenxe kwikhaya lakho elihlaza
Uhambo lokuphumla? Gcina iCarbon Footprint encinci
Fumana uVavanyo lweMandla oNgenakho lwamaKhaya
Yeka Ukufumana I-Mail engenayo
Ukutshintsha kwemozulu kunye neNamandla ahlaziyiweyo
Enye yezona ndlela ezintle zokunciphisa ukufudumala kwehlabathi kukusebenzisa amandla angaphinda avuselele i-gases.
Isicwangciso soMbane esiCocekileyo
Iimithombo eziMandla eziPhezulu eziNinzi eziNzileyo
Yintoni iWindows Power kwaye isebenza njani?
I-Pros and Conserve ye-Power Power
Izothutho kunye neePetroli eziNye
Iingxelo zezothutho ezingama-30 zee-all greenhouse gas emissions e-United States-ezimbini kwiyesithathu zeemoto kunye nezinye iinqwelo-kunye nezinye iimeko eziphuhlisiweyo kunye neentuthuko zijongene nemingeni efanayo.
Iiproleli ezingezinye ezi-8
I-Ethanol: Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiweyo Nge-Ethanol
Kwiphepha 2, ufunde oko oorhulumente, uluntu lwentlalo, iimeko zendalo, kunye neengcali zenzululwazi zithetha kwaye zenza ngokufudumala kwehlabathi.
Ukufudumala kwehlabathi kuyingxaki eyinkimbinkimbi enokuthi ixazululwe yimizamo yomhlaba wonke ebandakanya abantu, amashishini kunye noorhulumente kuwo onke amanqanaba. Ukufudumala kwehlabathi kuchaphazela wonke umntu. Nangona kunjalo, imbono yethu malunga nombandela-indlela esiyibona ngayo nendlela esiyikhethayo ukuyilungisa-ingafani kakhulu neembono zabantu abavela kwezinye iindawo, ubugcisa okanye uluntu jikelele kwihlabathi.
Ukufudumala kwehlabathi: Izopolitiko, uRhulumente kunye neenkundla
Oorhulumente badlala indima ebalulekileyo kumgudu wokunciphisa ukufudumala kwehlabathi kunye nemigaqo-nkqubo yoluntu kunye neenkuthazo zerhafu ezikunceda ukukhuthaza izenzo ezakhayo ngamashishini kunye nabathengi, kunye nomgaqo-nkqubo onokuthintela ukusetyenziswa kakubi kweengxaki.
Ngaba i-United States kufuneka iphumelele iPrototi yaseKyoto?
Inkundla ephakamileyo yase-United States iyalahla umgaqo-nkqubo we-Bush on Vehicle Ukukhishwa kweGesi yeHomehouse
Iingcali ezi-6 ze-EPA zangaphandle zincenga i-Bush ukuze zilungele ukufudumala kwehlabathi
Ii-Arhente zaseburhulumenteni ziphanda iibango zokuthi i-Bush Administration iguqulwe isayense
Intshisekelo yeCongress in Global Warming Heats Up
Urhulumente kunye noRhulumente beNgingqi
ICalifornia idlula iBill ye-Breakthrough yoNcedo ukuNcedisa i-Curb Global Warming
Isivumelwano seMeya yase-US Isivumelwano sokuKhuselwa koKhuselo
Amandla ama-US ase-US athembisa ukunciphisa ukufudumala kwehlabathi
Rhu lumente kwihlabathi
Iikhokeli zehlabathi ziqalise iNkqubo yokuKhuthukisa umsebenzi kwi-Global warming
Ukufudumala kwehlabathi kunye nezoshishino
Ibhishino kunye nezoshishino zihlala zikhutshwa njengeendawo zokungqongileyo, kwaye ngelixa kuyi nyaniso ukuba uluntu lwentsebenzo luvelisa ngaphezu kwesabelo sawo sobushushu kunye nokunye ukungcola, amashishini enza kwakhona ubugcisa obuninzi kunye nezicwangciso ezifunekayo ukujongana nokufudumala kwehlabathi kunye nezinye izinto ezingqongileyo imiba. Ekugqibeleni, amashishini asabela kwiimarike, kunye nemarike nguwe kunye nam.
Ubambiswano lwezoLimo lweMozulu yase-US: I-Coalition for Change
Ubulungu beCommunity Action Partnership I-General Motors ibonakalisa ukulwa nokutshisa kwehlabathi
URogers and Me: Udliwano-ndlebe noDuke Energy CEO uJim Rogers
Ukufudumala kwehlabathi kunye neMidiya
Ingqongileyo ibe yinto eshushu kakhulu kumajelo eendaba, ngokufudumala kwehlabathi okukhokelela uluhlu lwezifundo. Omnye wemimiselo emihle yiNyaniso engeyiyo , eyavela kwi-slide show kwifilimu yombhalo ophumelele ama-Award Academy Awards.
Ukuphononongwa: Inyaniso engeyiyo
Inyaniso engeyiyo iNgqobhoko ibamba ii-Oscars ezimbini
Ukufudumala kwehlabathi: iNzululwazi kunye nokungathembeki
Nangona ulwalamano olusasazekayo lwezesayensi malunga nokunyaniseka nokuphuthuma kokufudumala kwehlabathi kunye nemiphumo yalo ekulindeleke, kukho abantu abasifungayo ukuba ukufudumala kwehlabathi kukugxeke kunye nabanye abathi akukho bukho bobunzululwazi obukhoyo. Iingxabano ezininzi zokufudumala kwehlabathi zilula ukuphikisa ukuba uyazi iinyani.
Ngaba Ukufudumala Kwehlabathi Kukho I-Hoax?
Nangona kukho ezinye izazinzulu ezingavumelani ngokusemthethweni nabaninzi babo oogxa malunga nokufudumala kwehlabathi, abanye bayabakholelwa ekuqeshweni, bakwamkela imali kwiinkampani okanye kwimibutho ababaqeshayo ukuba bajongene novumelwaniso lwezesayensi ukwenzela ukudala ukungaqiniseki koluntu kunye nokugxeka kwezopolitiko ekwazi ukutshisa ukufudumala kwehlabathi.
Iqela le-ExxonMobil-Funded Fund linika iSosayiti yeShishini sokuhlaselwa kweSigqeba esikhulu sokuHlulwa kweMhlaba jikelele
Umbutho Wemihlaba Ukufudumala Kwehlabathi Ukuhlambalaza-ukuhlawula i-$ 100,000
ISosayensi inqabisa iziThengiso zeTV eziThuthelekileyo ngokuLawulwayo kwiSizwe ngokufudumala
Ukufudumala kweMhlaba kwenye indawo kwiWebhu
Ukufumana ulwazi olongezelelweyo kunye neembono malunga nokufudumala kwehlabathi kunye nemiba enxulumene nayo, khangela iisayithi ezilandelayo:
I-Panneal Governmental Panel kuTshintsho lwemozulu
I-Royal Society-Uguquko lwemozulu
I-Arhente yokuKhuselwa kweNdalo yase-US-Uguquko lwemozulu
Ukuguquka kwemozulu kwabantwana-i-Arhente yoKhuselo lokuSingqongileyo
Imozulu yangempela: iNzululwazi yezeMvelo kwiSimo seNzululwazi
I-National Resources Defense Council-Ukufudumala kwehlabathi
I-Sierra Club-Ukufudumala kwehlabathi kunye neMandla
Kwiphepha 1, funda kabanzi malunga nezizathu kunye nemiphumo yokufudumala kwehlabathi, yintoni eyenziwa ukuxazulula ingxaki kunye nendlela onokukunceda ngayo.
Ukufudumala kwehlabathi kunye neGulf Stream kudibene njani?
Yiyiphi imithi echithwe kwi-Global Warming Firearm?
"Ubusuku Oyingcwele" nguSelma Lagerlöf
Ulwahluko lwegrama phakathi kweSpanish nesiNgesi
I-Grip Grip Full: Okubalulekileyo Ukunyuka Kwamandla
Isandla Esimnyama: I-Serbian Terrorists I-WWI